Been na-agbagharị ब्लॉग gị nwa oge wee nwee ohere ịgwa ndụ na-agị akwụkwọ gị okwu, ọkachasị ndị ndị nwwado gị kachasị akwado.
Ọ bị ezie na ọdỌnaya ụhụrị gw nwere ike abe maka oge ụfọdụ na ọbụna ndị nleta oge nileile, ndị na-agụ akwụkwọ na-eguzosi-z’z n’h’h’h’h’hh’hzz ना हा t hakwasịrị gụ obi da ka ikike na nchịkọta g-na ha na-echekwa banyere gị n’onwe gw.
N’ime nd’ a na-agụchi obi na nd-na-akwado nkwado bị ndụ-na-enwe mmekọrịta chiri anya, n’ihi na:
Ị nwere ike ịmara ha site na tupu ब्लॉग gal amalite
हा नीरे उर्फ ​​ना म्पेप्टा आहka
हा ना-एन्ये उर्फ ​​ना ब्लॉग gị n’ụtụtụ ọz site, साइट ना ntichenye echiche maka akwụkwọ ndị ọbịa
हा नीरे जी n न्क्वाडो ओबी ना / मा ụ बी i ईगो आइजी जीड ị ना ब्लॉग जीịएमबी ị chọrọ ya
मा ị bw n’ihi na nwere ike ụmep .ta
आबेरुकवो नीक नी n नीड एनसो ओजो ‘एनके इनरे इके उर्फ ​​टोलिट आला गी
Obere nke ndị ahịa ma ụ bị ndọ mmekolog ogologo oge ọchjirọ iji ọdịnaya pụrụ iche
ओटू ugwè ndị na-elekwasa anya na-elekwasị Anya na ọn na ọgụgụ dị nta nke ndị so na ya
Ụzoke ntanetị dị oke ebe
ओटू uwwè ndị बीटा ना-अगji iji nyochaa ụrụ gb na-agbasagh ag
Ihe kpatara nwere ike kbu otu puku na kar ,a, mana ihe doro anya boro na nd – na – agụ akwụkwị a adịghị ka ddị na – agụ akwụkwọ oge niile, na –adịgh n kd n nk n n n n n g, मा ị bụ ezinịlị gọ.
Nke ah e bke mgbe-na-eke akwọkwụ akụkọ ma ọ bwa ọkwa kachasị mma bụ ezigbo echiche.
1 केडू ihe bụ Akwụkwụ Akọkị Ndụ Akaụntụ?
1.1 ओटु ओ सी एसि न अकुव्वुक अकुव्वो ओजी
2 केडू इहे मात्र ụmeputa Akwọkwụ Akọk i Ndị Akaụnthe?
2.1 1. इसरो ममेकृता Goro बारा उरु
2.2 2. ọchịrọ ịkekỊr nta nd-na-ege gị ntị
2.3 3. 3. ChỊrọ Ịduzi Otu Nd-Na-agụ AkwỊkwọ Na-ag-Ihe Na-eme Ihe साइट आला आला
2.4 4. 4. bche nkeonwe na ebe nchekwa
2.5 5. ईमेल ना- enye mmekọrịta enyi
2.6 6. 6. ChỊrọ इवुरु ओबोडो
2.7 7. Ighe / Ịmalite Izi Ihe na Nzaghachi Mee Ka ị Dị Elu
2.8 5. नमिता नजघची न्हाजी न अकवक्Ọ Ọgụgụ
2.9 Ihe मात्र ichi akwukwo akwukwo akwukwo di iche iche abughi onye Elitist
3 अ िस Mepụta Mpempe akwọkwị Ndụ Akaụntụ
3.2 इजी Ngwweta Na-ejik Ng Onwe Gọ
4 At jmat a iji jide n’aka na akwọkwụ akọkọ gị ga-arụ ụrụ
4.1 मारा nda देबनेरे अहा g n
4.2 Gbapbta ma ọ bụ na ụ bịgh Go, गो नवरेला नाज़ी Gị
केडू ihe bụ Akwụkwụ Akọkị Ndụ Akaụntụ?
Nokwu ndị dị mfe, akwọkwzi ozi ọma ma ke bị nke kachasị elu bụ akwụkwọ ozi pụrụ iche – maọ bụ ndepụta nke akwụkw n akụk nv n n n n n nd n na-akwado onyinye gụ pụrhe iche, gị na / ma n bke uto nke oru gi.
Maka odidi ya, akwukwo akuko edeputara bu nke nzuzo na ndi mmadu kpoo oku, nke mere na ekwughi n’ihu oha – nkeke na – egbochi ndi mmadu emeghi onyinye puru iche site ntinye। Enwere ike ịnwe ike iche na nke a, man iwu izugbe nke isi okwu bụ na akwụkwọ akụkọ agụmakwụkịk bọkwa nke zoro ezo, nke ndị otu ya maara, dị ka kllị.
Mgbasaozi Mgbasaozi akwukwo ozi na Digital Quarters bụ ùkị-naanhe maka ihe ndị a:
Iji chekwaa olda olu ya na mkparụta irika chiri anya, Mgbasaozi Mgbasaozi na-aggide na-akpọ òkù-naanị akwụkwọ maka ndị nwere ihe dị okị ụnụ ahịa। Ọ b mmrỌ na ere nwere mmasị aranara ya, biko jụọ onye na-edebanye aha ugbu a ọhọrọ gị ma ụ b on rute onwe maka ichebara echiche.
Ihe nzuzo na – enyere aka izere ‘ekworo’ साइट n’aka ndụ na – agị akwụkwọ oge niile na ndị debanyere aha, nịị nwere ike iche na a-ahapụ gị n’agbanyeghị na ụo ईजी मी ये.
ओटु ओ सी एसि न अकुव्वुक अकुव्वो ओजी
एक ụkụlọtọ ala bk akwọkwụ akọkọ gị mgbe niile, idịnaya agbakwunyere dịịrị ndị debanyere aha nke blog ma ọ bọ weebụsaịtị na niche ma ọ bọ ọlọ Mgbe ibido akwụkwụ akọkọ (ọk lọtọ), ya na-eche ya na ntanetị nke ndị na-ege gị ntịke-akwụsi ike n’ihe ma nwee mmasị n’iido idoidoidoidoidoidoidoido idoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoido ido idoido idoido idoido idoido idoido idoido idoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoidoido फर देखा वैसे़ भी उत़रा है। eleta otu oge ma ụ ba na-eleta mgbe niile ma ọ chọghw inweta। ‘अगबकुंयेरे’.
Dka uomụmaatụ, kwuo na ọ na-agba ọsọ na blog na ụzụ ịmụ। Na mgbakwunye na ọdbnaya en na-enwe kwa ụbọchị, ọ ga-achị ka ị na-emeso ndị na-agụ akwụkunọ kachasị eguzosi ike n’ihe na akwụkwk akunkunkunkun Nke a ga-abụ akwụkwụ akọkị gụ.
Ugbu a, kwuo na mmadụ iri na ab’ n’ime nd deb a debanyere aha gị nyere gị उर्फ ​​ineta ihe ndị na – adịghị mkpa, nococha ọtụtụ ndị nn na nna ma nnukukhuk nuk debuk nuk ou (nkssịrụ साइट na oge g mak) maka obere wgwè a ndị mmadị na ndụ enyi, ka ha nweta ohere dị iche iche nke nnụnụ ma ọ bọ nke mbụ, zaa ajụjụ ndị ndị ụziri-na-es.
Nke a ga-abụ akwụkwem edemede gụ.
केडू इहे मात्र ụmeputa Akwọkwụ Akọk i Ndị Akaụnthe?
Nd ụ देबनेरे आहा ndị Elite bị ndị – na – azụlite (ed) mmek edr mmta chiri anya
मैन नॉनवे ईके इनवी ओबी अबी बेनिएरे इहे कटपारा ere गा – ईजी नी एवक्वेव अक्कुọ डॉक mक mkpa ọfọdụ echiche गिरी ike – मा w निवार ike गगị आदबरा इकबरा ike गप्प, मनु ike ike.
1. इसरो ममेकृता Goro बारा उरु
Ị nwere ike Ịchọta ndọ ịkasị gụ pụrụ iche ụ na-arịrịrịrịrịrịrịrịrị mmekọrịta na ụfọdụ ọdịnaya pụrụ iche ị maara na-ach-ma-ach-ma-ach-ma.
सैम विलियमसन nke Nsogbu Ndị Nchọk Uta Ubi na-ak nrọ ya ihe mere m ga-eji malite akwụkwọ ozi ọma na ihe ọ ptara ịkọ ezigbo mmekọrịta ya na ụfọd Ns nd Ns nd
A b A m onye na – ede blụg am, amalitekwara m iwu ndep’ta ईमेल n’af email gara aga, mana enwere m ụdị kọntaktị naịtị m kemgbe m bidoro। Enweela m wetụtụ nd-na-agk akwọkwọ m kpụt krg m kemgbe ọtụtụ afọ na azụlitela mmekọrịrị mụ na ọtụtụ n’ime ha, ọbụlagodi na-agwa ha-ok-agwa ha-ok-agar ha Yabuo mgbe oge ruru iji wuo ndep emailta ईमेल, ụ dị njọ ngịnye ndụ na-agụ akwụkwọ ndị mụ na ha-ag-okwu kemgbe ọtụtụ afọ। एकपीबिरी m ụdepụta ndep emailta ईमेल dhe iche maka ndị na-agụ akwụkwọ m na-eguzosi ike n’ihe, nke gụnyị ozi ịntanetị ụbọchị ọmụmụ na ozi ịntantetet एम गा-ईजीगाकवा ओज़ी ịntanet-ना-अर mak हा माका न्गाघची इज़ोक्वु मा ụ bụrụ ना m nwere echiche ọhụụ maka blọọigụ। का Ka dọ ugbu a, ndọ ọz-na-agk akwụkwọ m na-enweta ozi-e nkwado ole na ole na ọdịnaya dị ob na na-arịọ maka nzaghachi। Achp –tara m na usoro a na – enyere nd – na – agụ akwụkw eg m na – eguzosi ike n’ihe aka ịghọta na ha bara uru na – enyere aka na ntanetị nke blọgụ m, ma ka na – en – n – n – n- – ọzhe इहे बारा उरू.
Ọdịnaya pụrụ iche – ga – eji ihe edepịtara gị ga – adịr – gị na mkpa ha, mana n’ozuzu ị nwere ike ịhọrọ maka mmelite na ọdịnaya nke ị na – etipayatayatayat maayatagayatayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaaya ọ bz बीटा ọchọrọ nzaghachi ha na Ha gharatara gị karịa ndị na-amaghị gị nke ọma। नोर्मारा ना ọ chọrọ ka ha nwee ịdayanaya kachasị mma ara mepịtara maka ọde blọgụ gị.
अह्मेह एम नेरे न – agbapk akwọkwụ akụkọ d n iche, nke nwere aka na – emetụ aka na ndị nwere ogologo ande na ndị na – akwado otu n’rụ akụk m। Ụ m m m m m m m n’oge ogologo oge na – egbu mgbu ma ghara ugbafu mgbe m ‘ghaghar arhag’ akụkụ nke akụkọ ahụ। Akw Akkwụ akụkọ m meparatara ba maka ha, ebe ha maara etu weeb etsa wetị m na ịdịnaya ya siri gosipụta afọ irup tupu ngbanwe, na ọdịnaya e mere mere obere otu na na – e -jikāvọa। इमे। ओबुरू ना अघोटा एबे हा नो ना मेग्बे अहू.
2. ọchịrọ ịkekỊr nta nd-na-ege gị ntị
Otu n’ime ihe ndị mere e ga-eji mep ata akwụkwọ ozi ọma, nke dị iche n’etiti ndị dị iche iche nkeị ndị na-ege gị ntị dabere na mkpa na mkpa ha pụrụ iche bhe i d i i N’ezie, nke a bụ ihe a na-emekarọ n’ụtụtụ ,rị niche, dụ ka golf.
डैनियल स्कारिटका, ओने न्च्क्वा आह naा ना एनकोन, ना-अकोवा:
Ndepta ndepụta dị mkpa iji kwalite ngwaahụa / ọrhe dhe iche iche nye ndị debanyere aha ha। ENECON bụ ụlọ ọr-na-emep ita ihe ndozi na ndozi nke na-edozi ọtụtụ nsogbu। Ebe ụ bbe na anyị na-azị ah maka maka ịdọ 30 dị iche iche na ndhe ọrụ njedebe dị iche iche, ụlọ ọrụ ndị akọwapụtara na-ekewa ndepụta any-i-lepa mepa। Anyz agagh-ezigara ndị na-aha maka ụrọ ọrụ ọlụ -rọ na-arụzi ọgbọ मिमीिरी ना-आर्ज़ी ọgbọ मिमीरी। Mgbe g bụla anyị bulite kakntaktọ ụhụrụ na sistemị ईमेल anyị, anyị ga-ekewa ha ọzọ isii dị iche iche। Kntaktọ ईमेल anyị na-enweta na igbe mbata ozi anyị ma ọ bịrụ na kọntaktị enweghị ngalaba ọrụ, कोई भी गा-edowe ya na listi izugbe। N’oge na-adịbeghị anya, anyụ zipụrk akwụkwụ akụkọ pụrụ iche na ndepụta ईमेल anyị niile na-enye nhi ehihie na iny onyinye ma ọ bụrụ na han na nayennchichi n -chi nọchi no -nchi Anyọ नतारा ụnụ ọgụgị dw ukwuu nke mmeghe site na email ma hazie matụtụ ngosipụta maka ndị ahịa anyị। Marketingz Marketing ahda email na nkebi ndepụta bọ ngwaụrụ dị ike maka ọla ọrụ nwere ike iwepụta azụmahịa ọhụrụ.
3. 3. ChỊrọ Ịduzi Otu Nd-Na-agụ AkwỊkwọ Na-ag-Ihe Na-eme Ihe साइट आला आला
Mgbe gfọdụ ndbe na-ede blụg niche na आला gị-gb-agbasa ozi na-ezighi ezi, mgbe-na-eme ike gị niile \_ _ nyere ndị na-agụ akwụkw site aka site na ọdụnnaya gnnnaya ब्लॉग gdnayaaya gdnaya ब्लॉग gdnaya ब्लॉग के लिए iji nweta ihe ịga nke nichema na niche g i.
Otu ihe atu bụ kwa izu माइकल मार्टिनेज अला अला माडा ndị SEO na nd – ahịa – ị na-akwụ $ 32 / ọnwa iji debanye ahaịị akwụkwọ akụkọ a ma na-agbanwe ya na ị गाता – en – गाता – en-ga। ịnweta ebe ọzọ। (WHSR के जेरी लो बब्बू ओने देबनेरे आहा।)
4. 4. bche nkeonwe na ebe nchekwa
N’adanygh’ ka ndị debanyere aha na nd-na-ege ntị mgbe niile sitere na mgwa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, ndị yiri ka ha nwere ekele maka nkwupụta ọha, अह अहम्म्म्म, अहम्म्मम्म, आह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्। ụf nadụ ndị egwu na-eguzosi ike n’ihe na nd a debanyere aha egosighi mmasị n’igosi na blọọgụ m ma ọ bụ na naọwa m.
Ihe nzuzo nke akwukwo akuko edeputara enyere aka ime nke a। N’ezie, ụ bụrụ na ekpughere ọ b mala ma ọlị, na mere site na iji aha njirimara, ebe ezigbo aha ha na na ma maọ bụ adreesị weebụ ha ka bụrụ nke nzuzo। Enwere m ndị kọntakt-na-ara k a ghara igosipụta aha ha ma ha bị ईमेल ना nzuzo ha, ụfọdụ esonyeghị na nnọkọ m guzobere iji mejupụta akwwwkkwwkkwwwkkwwkww Nd nazị họọrọ isonye na otu akwọkwọ akụkị naanị otu karịa na ndepụta izizi izizi maka nke a.
Emere m nkwa dị iche iche na ndep bta banyere nchegbu onwe onye, ​​enwere mmasị na m gbalịsiri ike ịnọgide। एच ओ ओकेपुरु:
Ntuziaka ML / akwụkwụ akọk k m kwadoro na okwu banyere nchebara onwe g /
5. ईमेल ना- enye mmekọrịta enyi
N’ezie, maka ọtụt’ n’ime nd deb m debanyere aha ha, email dị mma karịa मंचों n’ihi nkwa ahụ na akwụkwọ ozi ga-ezo na nzuzo, ka onye na-edebanye aha nwekwara ike mak mak mak mak g य.
Nke a buz eziokwu n’ozuzu maka ịdị ndị niile debanyere aha, mana ọ bụ ezie na ndị na-edebanye aha mgbe ai mgk-ekwukarị banyere iwepụta ओन्ने-न्हा-नहा-मुहा-नहा-म्ह-न्हा। एमएमए मा टीनये उर्फ ​​ना न्कुरुता ओक्वु, कार्सुसा ना ओमिमी य.
निकोल बरमैक, एडिटर ना एडवर्डस्टर्म.कॉम, एमबाक ए derm mb mbanye anatagh n ikike n’ihi na-edebe mmekọrịta na gị ndepụta, òtù dị ndụ:
Ihe nkwuba anyi n’eme ngbako ime ihe CTR abanyela na 175% n’ime ime i di di nfe। Mee ka onye na-ede akwọkwụ akọkị gị chọp onta aha onye ye na-ezigara ma jiri aha ahụ na mbido ozi ị anananetị ahụ। “Ndewo निकोल!” B एज़िगो एनी कारा “नादेवो, ओने न्वेइके yedenye aha ndephata m”। Nke a b i ọzọ dị mma iji bulie CTR (pinye aka na ntanete) ma mee ka ndị debanyere aha ha h na na hụrụ ha nanya.
Ọ bararỌ na i mepụtara ala nnabata na ọchọrọ ka nd a debanyere aha gị pụrụ iche na-arụsi herụ ike ma na-ekwurịta okwu, ịchọrọ ịchọtaụ ụchọrụ ụịọọụ ,ụụụụụụụ ụụụ ụụ ụ.
6. 6. ChỊrọ इवुरु ओबोडो
Nd ना- edebanye aha nd n अभिजात वर्ग nwere ụnọ -kụ n’obi maka ụba akụkụ nke obere ìgwè nke pụrụ iche nai isi i na-elekwasị anya। Ọ bị ezie na nkwur okta okwu na-abịkarụ otu n’ime m – zt –tụ ndị kwadoro usoro ahụ – ụfọdụ n’ime ddị a-egosikwa na ha nwere mmasị ịmata ibe साइट साइट ụe ha साइट साइट z haz) एच ओ ओकेपुरु:
Mkpok MLta nke mejuputara ML / ala ala m
Akwukwo ozi m nwere ngwongwo “nzipu ozi nzipu ozi +” ma mejuputara ya na nzuko nke onwe। Ejiri m GMANE maka ngwanrd ndep nta ndep ,ta, nke befara n’efu na ngwọta cPanel m। Nd otu niile sonyere nwere mmet nata na ha sonyere na obodo, ụthetọ ihe ndị ọzọ na ndepụta karịa na nzukọ, n’ezie.
Nke a bke nseta ihuenyo nke ọfụd’ n’ime ML / akwọkwị mkparịta ụka:
7. Ighe / Ịmalite Izi Ihe na Nzaghachi Mee Ka ị Dị Elu
एनडीị देबनेरे अहा एलीट ना-एनवेकर एमएमसw इनविटा anydịnaya ọz a। Enwetara m azịza ozi anntanet ma m ma amaara m site na mkparụta ịka ndị ọzọ na ndị mmadụ na-agụ ozi ịntanetị m ọbụlagodi na ha azaghịị.
हा nwere ezigbo mmasị na ozi anntanet n m n’ihi na nke a bị adụnaya niile anaghị m akpọsa na aaghị eso nzị mmadụ। Na mgbakwunye na nke a, m na-ekwe ka ndak debanyere aha m ọl m erụ nwee mmetụta ọdịnaya m ruo na nzzhachi ha, ha na-eme ihe mgbe niile dị kd ndị-ag-aga-agata-ag-ag-beta-aga-aga-beta-ag , तो मेरे हा-ना-एवेकरị एगो naबन्ये ना erederenaya ụhụr ha. .
Ị nwere ike akmatakwuo ihe nd sit एक सिटेरे न निस्ता इहुएन्यो du n’elu.
5. नमिता नजघची न्हाजी न अकवक्Ọ Ọgụgụ
Ebe eb bbe na ndị na-edebanye aha na ndọ ọkacha mmas mm nwere mmasw dị ukwuu na akụkọ nke akụkọ akụkọ m nọgidere na-aga n’ihu, ha na-achọsi ike ike.pha।.
Nd फैंस ए क्वीरे न इहे मी ना-एन्वेता साइट ना ọbanschị, इहे मेरे इहे द i आइच एन’ọzọ, karịsịa na àgwà nke nagaghachi हा। Mgbe g nwetara nkwado dú otú a site n’aka ndị debanyere aha gw, àgwà ọdịnaya gị ga – ejidekwa – ara maha na ndị fan a kwere na gị, n’ihi ya, ịzzza nzchi ना – अग्नब्वे। अमारा m na ọ na-arụ ụr। M.
Ọ bụrỌ na ịmepỌta listi ndọ ackachamara, jide n’aka na ‘nwere ịwa ndị ọzọ maka ndị debanyere ahaị iji hapụ nzaghachi – ọwa naanị otu aka duaụa। nch nkereta onwe dịka m mere na Robocity World Fans.
Ihe मात्र ichi akwukwo akwukwo akwukwo di iche iche abughi onye Elitist
Ọ bụrỌ n ‘Ọgbarz nzukọọ na blụguru zuru ezu, ụ ga-ahị ọtụtụ echiche megide pakpa agwa। Enwere ndw kwenyere na ekwesighi inwe nd n ọrụ na-enweta endịnaya pụrụ iche karịa ndị ọzọ, n’agbanyeghị uru.
Ka osi di, imeputa akwukwo ozi di elu maka ndi n’enwe otutu oge na ndi nekek ntinye akwukwo nwere olile anya iche abughi ihe na – ele anya। Dka mgbe w nwere ezigbo ndyi enyi – nd mg maara ihe nzuzo gz – याना ndị enyi ndị ọzọ – ndị ị hụn n’anya mana ha enwetabeghị ntụkwasị obi zuru ezzzzu maịzu maịz.
Na-enye ndi mmadu ihe ha choro – na ufodi ndi mmadu gadi choo (ma kwesiri ya) karie n’ihi na ha kwadoro oru gi site na uboat otu, ma obu nihi na ha nwere odi iche di iche iche nke-akwwuk आदि.
अ िस Mepụta Mpempe akwọkwị Ndụ Akaụntụ
N’Nzị bụ isi, nke a dhe iche na ụmepụta akwọkwụ akọkọ mgbe niile, ma e nwere ọzọ ole na ole ị nwere ike jime iji mepụta oge, ego na iswwa.
MailChimp -enye njirimara nke esemokwu na otu maka ndị -rk na-akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ। का हा ना-एतेनये ये, "esemokwu na ìgwè dhe iche iche na-eme ka ị dị mfe iziga ndiz nwere afọ ojuju ha-na naanị ọdịnaya na na-eche."
मैं nwere ọzọ abụọ es ga-esi na-esite n’akụkụ dhe icic
Kwe ka ndị ọrụ banye maka ùt k ha kachasị mma, n’ihi ya, ị nwere ụdị dị iche iche nke ndepụta ị dị njikere
नलगबा न उर्फ ​​इजी मेप्पटा ndep nta ndep .ta.
ना ना ना ना सीजी बॉयस रियल एस्टेट कंपनी चोरो ọzbu mbu:
Mgbe g na-abịa n’ụmep nta ndenye n’ime listi, ka onye na-agye ga-ekpebi ihe ndepụta a ga-agbakwunye। Any na-es-esite n ndepụta nke MailChimp anyany banyere 700 n’oge na-adịbeghị anya iji tinyekwuo nchịkọta आला ndị ọzọ। Any mg g nnyere mgbakwunye nke ndep nicheta niche na isi ala anyị ma tinyezie otu akụkọ kwa izu साइट ना ndepụta ahụ na "ọchịrị ụgụ ihe da ka nke a".
Ọz Eyekwa, नाथन विलियम्स सी क्रेज़ी आई मार्केटिंग
अना m akwado ndị debanyere aha na-akwụ ọgwọ dabere na omume ha emebeghị / ewerebeghị। Dka ịmụmaatụ, njikị p ,a, mepee na emepe emepe.
Ọ bịrỌ na mmadụ pỌa otu njikị, anyara maara na ha d alkar na ala nwere mmasị n’isiokwu ahụ, anyị nwere ike ịmalite ziga ọdịnaya ọzọ na otu isiokwu na / ma ọ bụ bụrụ.
Ọ beerỌ na mmadụ mepee ईमेल, मन ịpaghj njikọ njik ahk, ikekwe anyụ esoghị onye ahụ rụọ ọrụ। N’okwu a, anyị nwere ike izipu ईमेल ọzw nwere otu njik man ahj, man gbanwee ọdịnaya nke ozi-e ahụ, maọ bụ anyụ nwere ike gaga isiokwu azọu.
Ọ bherỌ na mmadụ emeghegh, ईमेल, anyw nwere ike izipzi otu ozi-e ọbọchị na-esote usoro isiokwu ọzọ \_ _ nwaa me mee onye ahụ mepee email ahụ.
इजी उर्फ ​​gji dee ndep ata MailChimp gị:
गा ना ndepụta gị
पिया "Ngalaba" ndep dita di n’okpuru "निदो निले देबनेरे अहा" मूत pịa "मेपटा ओटू akụkụ"
Ị nwere ike ịhọrke nke a site na ụnọ ọgụgị nke ndụ debanyere aha ma ọ bụ ndị ọzọ ubi। Pọa bọtịnụ "पूर्वावलोकन" mgbe bemechara nhọrị niile dabara n’ọnịdụ gị (dọka ịmịmaatụ dị n’okpuru ebe a, ndị niile debereere aha wee banye na listi mgbe June 1st, 2016).
Nd ịrị MailChimp फ्री मेल nwere ike ọhọrọ उर्फ ​​5 ụn jd is ma jiri isi ihe mgbagwoju anya.
ली न्क्वा इहु अबू अबी इजी दूजी g i:
मैमट्टा MailChimp – Nzụkw। 1
मेटामेटा मेलकंप – Nzụkw। 2
Mgbe gfọdụ, dbeka na ahịm mhe m, ụ nwere ike ụchụ akịkụ याना niririsi na-etinyeghị na MailChimp – dịka ọmụmaatụ, ndị ọkpọkụkụkụkola nkụkola ụchụola Addb Addch n agbakwunyere ‘n’okpuru data onye debanyere aha kama.
N’Nnwdụ ahụ, ọnwere ike ụmep otta otu kama ụmep ,ta otu, ma jiri aka tinye ndị debanyere aha n’okpuru bu ndị otu ọkachamara। N’ezie, uru nke Njikụ ah Mail na MailChimp bie ohere kchekwa अहंकार ना नजीकवा ndepụta.
ओटू ओये न-ị आहị आह आह na ना ọlọ ụrye ntụr nnd ga, nke ga-aọgide na-enweghị aha, gwara m:
N’ezie, ụ bụrụ na ọ nereere ụtụtie ndepụta, ga-aba uru karị inwe otu nnukwu ndepụta ma ja n’aka na-ejikwa ya site na iji otu na ngalaba। Ihe मात्र b n na nụụz m dú otú a, a na-akwụ ọgwboro otu ugboro na adreesị ozi-e। Ọ bọrỌ na Ọ nereere ụtụtd ndepịta dị iche iche, ma, nwere otu ndị ahụ [na] मा ndetu, ị na-akwụ ụgwọ ha ugboro abụọ.
इजी Ngwweta Na-ejik Ng Onwe Gọ
Ọ bọrỌ na akwụkwụ akọkị gbag gbagoro agbakwunyere ga-enwe naanị kọntaktị ole na ole (ihe na-eruịịị 100), ịnwere ike ịhọrọ nhazi onwe nke agke-et-agke-et-nụụụụụ.
Dịka ịmụmaatụ, ndọ ackachamara Robocity na-eguzosi ike n’ihe na-agụnye ihe na-erughị ndị 50, ebe ọụ na ezigaghị m otu ọ bụla ma ọ bọla ma ọ bọla ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ na – esi na onye ọbịa m – n’eziokwu, M ji Thunderbird-naanụ oge mbụ tupu ịkwaga GMANE, ị dịghịkk mgbe ọ bụla ọ na-akpata nzacha spam, on dghịkkkk.
एज़िरी एम ओटू kakntaktiri na ngw nta nke m kwadoro (M na-eji ma GMANE na onye ahịa email m) ma nye aha ya.
Edere m email ahere ma zigara ya otu (ụ bụr-na-eji onye ah ,a email m, m ga-ahọrọ BBC ka ndị ọzọ zoro ezo ndd noro ezo nye ndị nnị nnata ahụ, ọ gwụla ma anyp) OLE).
अना m akwado gị ka a jiri usoro a naanọ ma ụ bụrụ na ndepịta gụ dị obere, ụzọ dị ala karịa otu narị ọntaktị iji nọrọ na nchebe। Ma imp bụghị ya, MailChimp bọ nhọrac kachasị ọnịahịa ụ nwere – ọbụnakwa nweere onwe ya nye ndị debanyere aha 2,000 – na ngwọta kachasị amasị m ugbu.
At jmat a iji jide n’aka na akwọkwụ akọkọ gị ga-arụ ụrụ
Ndepta njikwa na nurturing mmekịrụta bi isi ihe na-agba -sa ना-आगा nke ọma, मा ụ bụ ọkwa। Atụmatụọ ndụmọdụ ab na a na – eson – ga – enyere ndị na – agụ akwụkwọ gị उर्फ ​​ना ओबी ụtụ.
मारा nda देबनेरे अहा g n
Gwa nd n debanyere aha g n, nyochaa ma nyochaa ha mgbe maka nzaghachi na mmasị, jụọ ha ihe ha Ga-achọ ịhụ kachasị, soro ha rụọ ọrụ na-emepụta ọdịnaya ha nwere मिमी मिमी.
Dokwesighi ime nke एक साइट na akwọkwụ akeskọ naanị; ị nwekwara ike iji nyiwe ndọ ọzwara। Ndi akwukwo edere akwukwo bu nk nkem Nkwalite DeviantART, ya mere, ikpo okwu bụ ebe kachasị mma maka m ọkọnụta ndị debanyere aha m, na mgbakwunye na ML / ala n’on-n’weweuk.
Ọ b nrỌ na ndepụta ndụ ahị du elu ka k nwekwara ike ire ikeaụ na ngwaahịa dhe iche iche, lelee Lori Soard Ntyeye akwụkwọ 4 iji gbanwee ndị देबनेयर अहीर-माँ-आह। Maa-maụaụaụ.
Gbapbta ma ọ bụ na ụ bịgh Go, गो नवरेला नाज़ी Gị
केटलिन बोलनिक वेंचरएप, ना-एने अबू डी ओके Bolnụ ahịa ndepụta प्रबंधन Atụmatụ:
Otu n’ime akụkụ ndac kachasọ nja maka anyị na-ewu ọlu ụrụ ndị ahịa anyị na ndị na-ede akwkwọ akụkọ साइट na iji MailChimp। Anyd nwere ndepụta nke ihe karịr n 10,000 ndw debanyere aha na ndụ na-agụ akwụkwọ na-etinye अहंकार karịa ndịị ọzọ। ली ịzị abụọ a kapịrọ ụnke nke meworo ka enwewanye mmhereba na oghere na ọnụ उर्फ:
1. ईमेल ब्रेक ब्रेक: ụ bụrụ na ndọ ụrepe emepebeghị akwọkwụ akọkọ anyị na ọnwa 3 +, anyị na-eziga email nkka iji mee ka haa mara na a-edebanye aha ha n’akwọkọkwọ.
Nke a na-ebuli elu ma ụ b-na-emekara ka ndị na-edebanye aha ना-एमेघची ओमूम। ỤtụtỌ ndị ọr-Ga-aza ma ra ka ịnọ na ala। N’aka nke ọzọ, aka bụr en na enwegheg mmeghachi omume ma ka bbe akaebe na-agbaso ईमेल, anyị wepu aha onye ọrọnụọọ। Nke a na-eme ka anyị nwee njikọ ụnọ na ọnụego na-emeghe ma na-enye anyị ohere ilekwasị anya n’ịchọn ndị ọrụ na-emekọ ihe.
2. ज़िगा ओज़ी anntanetiga ugboro abg Mgbe ọfụdụ: mgbe ụfịdụ anyụ ga-ezitere anyị akwụkwọ akụkboro boro110 ụọ abụọ ma ọ bụrị na anyị na-ahụ ala karịa ita nkaye aka nka aka nka aka nka aka nka nai Ihe nke a pụtara bụ na any-ga-ewep nta ndị ọreg na-emeghegh em ईमेल anyụ ma zighachi otu email ahụ na isiokwu dị iche ma ọ bụ ọdịnaya dị iche iji hji ma anyị nwere ikeụ ụụ Oge ọfgedụ, usoro isiokwu adịgha mma nwere ike imetọta ụnụego itinye उर्फ ​​ना yabọ ọ dịkwa usoro nnọale bara uru। Ekweswrw iji nke a mee ihe n’ọz-na-adịghị mma ka ị chaghị ịkpasu ndị debanyere aha gị ma ọ bke nke ka njọ, na-emebi ntụkwasasị obi hai.
Enwere m ozi anntanetere dk mkpa ugboro ab’ n’oge gara aga, na m chere na ndị debanyere oge mbụ nwere ike ịhapzi ha। N’ezie, mgbe mgfọd n, nke ahụ bik ikpe ahụ, ọnụ ụgụgụ a na-ahụkarị dị elu karịa oge nke ab mg.
Lettermepterta akwụkwụ akọkị doke oke mma bụ ezigbo echiche ma ụ bụrụ na ị nwere otu ndị na – eme i i nkiri, ndị ahịa, ndị na – akwado ma ọ bd nụd nụdụụụ nd nụdụụụ Emep Emta otu naanị ka we nwee inwe ndụ pụrụ iche nke nd a debanyere aha ma ọ bụrụ na e nweghị ihe zuru oke kji ndị na-ege gị ntị ma ọ bụ na unweghịeịeghue। iwulite mmekọrịta bul ntịala dk mkpa maka akwụkwụ akọkọ kachasị एमएमए। , मा ma nwere ihe ọzị – ga – enye ụfọma nye oke uru ga – apụkwa iche site na akwụkwọ akụkọ mgbe ochie.